Download မိဘ​ကျေးဇူးအထူးသိပါ+တရား​တော်​+ +thitsarshwesi+အရှင်ဥတ္တမ+ သစ္စာရွှေစည် MP4 3GP MP3 HD youtube videos - www.Waplic.Co
မိဘ​ကျေးဇူးအထူးသိပါ+တရား​တော်​+ +thitsarshwesi+အရှင်ဥတ္တမ+ သစ္စာရွှေစည် Download free 3GP MP4 MP3 Video on many video type quality Flv Webm 2D 3D SD HD through online using your Mobile Phone Smart Phone, Android, Iphone, Symbian, Java or PC - www.Waplic.Co
Download မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်)
မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်)
by သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ
1 Hour5Minutes 38 Seconds
This video demonstrates gathering or connected individuals or of human as per unremarkable intrigue. furthermore, concentrates all the more frequently to identities and purpose of individuals. This video assigned မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) is assigned to allot someone`s encounter, conclusions, exercises and remarks about the point that is verbalized by its group. သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ is an unselfish individual that ofcourse needs to profit us. I trust the video slaked your objective after optically peddling. Enjoy Free Download မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) mp4 mp3. This is such an awesome video! မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) video is transferred to speak to People & Blogs purposes. It isavideo caused by the uploader with such an awesome exertion and have the craving and commitment to benefit you or inform you about this. Moreover would like to add to your enthusiasm under Enlightenment and I trust the two of us delighted you. There are 16,389 and 14 (Fourteen) watchers who left their remarks so i guess it was such an interesting video.
အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော - မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ်တရားတော် (29 Oct 18)
Video Courtesy to သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ
, Download မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်), Free Download, MP3 Download, မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) MP4 Video Download, Fast Download, All Video Download, မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) 3GP Download, 3GP, Video Song, Movies, HD Downloads, Hindi, Mobile Video, IOS Videos Download, Online Video Downloads, Iphone Videos Download, Android Videos Download
Published 14 October 2011| Subscribed 4,515| Videos 225
You can select videos related to မမြင်ရမည့်အပြစ်နှင့် မြင်ရမည့်အပြစ် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) below...
ဇရာသုတ္တံတရားတော် တောင်ကြီး - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ
အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော - ဇရာသုတ္တံ တရား​တော် တောင်ကြီး
သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ | 01 December 2018 | People & Blogs
ခိုကိုးရာရှာထားကြ မေတ္တာလမ်း ကွယ်တော့မယ် တရားတော် အရှင်ဇေယျဝရ မေတ္တာဂုဏ်ရည်ဆရာတော်
(၁၁) ကြိမ်မြောက်၊ မြို့သစ်ရပ်၊ ဓမ္မစေတနာရှင်အကျိုးဆောင်လူငယ်များနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာသဘင် နဝမမြောက်ည မေတ္တာဂုဏ်ရည် အရှင်ဇေယျဝရ ခိုကိုးရာရှာထားကြ မေတ္တာလမ်းကွယ်တော့မယ် ထပ်ဆင့် ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။ ! ~~~~ ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ~~~~ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာထေရ် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ https://www.youtube.com/channel/UC4lAVNtPGevWJVPbWpaDD8w/playlists တရားတော်များ https://www.youtube.com/channel/UCPBgwswhfcor0BTL5S3TNTg/playlists ထပ်ဆင့် ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။ https://www.facebook.com/thurasoe779911777/videos/505859073238829/
MoeTayar မိုး-သစ္စာလေးပါး တရားတော်များ | 04 January 2019 | People & Blogs
သတိနှင့်ပျော် စိတ်ကိုစောင့် လွတ်အောင်ရုန်း (02/Oct/2009) - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်)
အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော - သတိနှင့်ပျော် စိတ်ကိုစောင့် လွတ်အောင်ရုန်း (လှိုင်) ၂-၁၀-၂၀၀၉
သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ | 28 February 2018 | People & Blogs
"ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား" တရားတော် - Thitsarshwesi အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) ဆရာတော်
အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) ဆရာတော် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Sydney မြို့တွင် ဟောကြားတော်မူအပ်သော " ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား " တရားတော် (၂၀.၁၁.၂၀၁၇)
သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ | 01 December 2017 | People & Blogs
23 Feb Evening အလုပ်ပေး
သစ္စာရွှေစည် အရှင်ဥတ္တမ | 15 March 2019 | People & Blogs
🌹🌹🌹တရားအားထုတ်ခြင်း၏ အကျိုးများ တရားတော်🌹🌹🌹သစ္စာရွှေစည် ဆရာတော် အရှင် ဥတ္တမ🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹
buddha dhamma dhana
Buddha dhamma dhana | 07 February 2019 | People & Blogs
ဓမ္မ သုခ | 17 September 2018 | People & Blogs